के यसले तपाईंको दैनिक औषधि लिने समयको फरक पार्दछ? - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा भारी खेल कम्पनी, औषधि जानकारी कल्याण कम्पनी समुदाय औषधि बनाम मित्र समुदाय, कम्पनी समुदाय, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, समाचार घरपालुवा जनावर
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> के तपाईले औषधी लिने बित्तिकै फरक पर्दछ?
जब नयाँ प्रिस्क्रिप्सन प्राप्त गर्दै, फार्मासिष्टलाई तपाईंको बारेमा महत्वपूर्ण जानकारीको समीक्षा गर्ने जिम्मा दिइन्छ औषधि व्यवस्थापन । ऊ वा उसले कभर गर्न सक्ने चीजहरूमध्ये एउटा हो कहिले औषधि लिन। जस्तो कि केही नियमहरू खानाको साथमा लिनुपर्दछ वा राम्रो ग्लासको पानीको साथ सबै भन्दा राम्रो परिणामको लागि, समय लिने कुरामा पनि फरक पर्दछ जब यो तपाईंको दैनिक औषधीहरू लिने कुरा आउँछ। औषधी लिनको लागि उत्तम समय औषधिमा भर पर्दछ, तर यदि तपाईंको फार्मासिष्टले एकै दिनमा तपाईंको डोज लिनको लागि एकै दिनमा भनेको छ भने, यो उत्तम हो तपाईले त्यसो गर्नुभयो।
के यसले तपाईंको दैनिक औषधि लिने समयको फरक पार्दछ?
केहि अवस्थाहरूमा, तपाईको मेदहरू लिने दिनको समयले तपाईंलाई कम से कम साइड इफेक्टको साथ अधिकतम लाभ लिन मद्दत गर्दछ। यसको राम्रो उदाहरण भनेको औषधी हो जसले निन्द्रा वा हल्का मतली हुन सक्छ, कोलगन स्लोन, फर्म डीडीका अनुसार, आपतकालीन चिकित्सा कार्यक्रमका निर्देशक। युटा विश्वविद्यालय फार्मेसी सेवाहरु । ती अवस्थाहरूमा उनी सुत्नु भन्दा पहिले उनीहरुलाई लैजाने सल्लाह दिन्छन्।
तपाईंको प्रिस्क्रिप्शन लेबलमा तपाईको डोज, कति पटक लिने, र अन्य कुनै विशेष निर्देशनहरू (जस्तै कहिले औषधि लिने, खानाको साथ लिने कि नगर्ने, वा साइड इफेक्टको बारेमा चेतावनी) सम्बन्धी प्रासंगिक जानकारी हुन्छ। यदि तपाइँसँग तपाइँको औषधि कहिले लिने भन्ने बारेमा कुनै प्रश्न छ भने, तपाइँको डाक्टर वा फार्मासिष्टलाई सोध्नुहोस्। डा। स्लोन नोट गर्नुहुन्छ, केही औषधीहरूले बिरामीहरूलाई तन्द्रा दिन्छ, [जबकि] समान औषधीहरूले अन्य बिरामीहरूलाई बढी जागा पार्छ; तपाईंको स्वास्थ्य सेवा टोली तपाइँको औषधि आहार अनुकूलन मा सहयोग गर्न सक्छ।
एन्टीबायोटिक बिना यूटीआई बाट छुटकारा पाउने तरिका
यो बिहान वा रातमा गोली लिनु राम्रो हो?
औषधी लिनको लागि उत्तम समय औषधि, शरीरमा यसको प्रभाव, र साइड इफेक्टले फरक पार्दछ। उदाहरण को लागी, स्टेटिन औषधी उच्च कोलेस्ट्रॉलको लागि सामान्यतया मानिन्छ ओछ्यानमा लिँदा सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ। यसको कारण यो हो कि तपाईको कलेजोले कोलेस्ट्रोल उत्पादन मध्य रात पछि चुह्यो र बिहान र चाँडै दिउँसोमा कम छ। डा। स्लोनका अनुसार, [स्ट्याटिन] राती लिनुपर्दछ जस्तो कि कोलेस्ट्रोलको अन्तर्जात उत्पादन सबैभन्दा ठूलो हो। यद्यपि, उनले नोट गरे कि केहि नयाँ मेडहरूका साथ यो समस्याको जस्तो ठूलो हुँदैन। त्यहाँ 'नयाँ' स्टेटिनहरू (एटोरवास्टाटिन, रोसुवास्टाटिन) लामो आधा जीवनको साथ छन् जहाँ समय कुनै मुद्दाको कम हो।
सही समयमा औषधी खान किन महत्त्वपूर्ण छ?
उचित समयमा तपाईंको मेड लिनु भनेको दुष्प्रभावलाई असुविधा हुनबाट जोगाउने मात्र तरिका हो, यसले तपाईंको सुरक्षामा ठूलो प्रभाव पार्न पनि सक्छ। उदाहरण को लागी, केहि अध्ययन सुझाव दिनुहोस् कि राती सुत्नु भन्दा अघि रक्तचापको सेवन गर्ने औषधी लिनुले बिहानको तुलनामा अझ बढी हृदयघात र स्ट्रोकलाई रोक्न सक्छ। यो तथ्य यो हुन सक्छ कि प्राय: हार्ट अट्याक बिहान सबेरै हुन्छ। यद्यपि, अझै कारकहरू छन् जुन खेलमा आउन सक्छ। पुराना बिरामीहरू राती रक्तचापमा अचानक खसेको परिणामस्वरूप रातमा हुने खतराहरूलाई रोक्नको लागि उनीहरूलाई बिहान उनीहरूको रक्तचाप औषधी लिन सल्लाह दिइन्छ। केहि केसहरूमा, विभाजित डोजिंग सुझाव दिन सकिन्छ (जस्तै, बिहान आधा खुराक र साँझमा आधा खुराक लिने); यद्यपि सबै औषधीहरू विभाजित गर्न सकिदैन। यस कारणका लागि, यो महत्वपूर्ण छ कि तपाईले आफ्नो औषधि तालिकामा कुनै परिवर्तन गर्नु अघि तपाईको डाक्टर वा फार्मासिष्टसँग कुरा गर्नु हुन्छ।
के तपाईंले प्रत्येक दिन एकै समयमा औषधी खानुहुन्छ?
कहिलेकाँही हरेक दिन एकै समयमा तपाईंको मेड्स लिने सिफारिस गरिन्छ उनीहरूको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न। उदाहरण को लागी, जन्म नियन्त्रण गोलिहरु को लागी तपाईको खुराक एक ही समय मा एक दिन ले अत्यंत महत्वपूर्ण हुन सक्छ। विशेष गरी प्रोजेस्टेरोन मात्र गोलीहरूका साथ, समय गर्भावस्था रोक्नको लागि आवश्यक छ। यी औषधीहरूले तपाईको अण्डाशयमा अण्डा छोड्ने सम्भावना कम गर्भाशय र गर्भाशय अस्तर एक गर्भावस्थाको लागि प्रतिकूल बनाउने काम गर्दछ। संयोजन गोली भन्दा विपरीत, जसले अलि बढी लचिलोपनको लागि अनुमति दिन्छ, प्रोजेस्टेरोन गोली मात्र थोरै समय विन्डोमा बन्द गर्दछ। जे भए पनि, डाक्टरहरूले गर्भ निवारणमा औषधी प्रभावकारी छ भनेर निश्चित गर्न प्रत्येक दिन समान (लगभग) तीन घण्टा अवधिमा जन्म नियन्त्रण औषधि लिने सल्लाह दिन्छन्।
म कसरी गोली लिउन सम्झन सक्छु?
एकै समयमा तपाईंको दैनिक औषधि लिन सम्झना गर्न, क्रेग स्वेन्सन , Pharm.D।, Ph.D., डीन इमेरेटस र औषधीय रसायन विज्ञान र आणविक फार्माकोलजीको प्राध्यापक पर्द्यू युनिभर्सिटी कलेज अफ फार्मेसी , अनुस्मारकहरू प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछ।
त्यहाँ धेरै प्रकारका उपकरणहरू छन् जुन तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ औषधी लिन सम्झन। यी दायरा बाट तपाईको फोनमा अनुप्रयोगहरू , राम्रो गर्न को लागी, पुरानो शैली कागज र कलम योजनाकार। कुञ्जी भनेको तपाईले देख्नु भएको उपकरण प्रयोग गर्नु हो र प्राय जसो तपाईले प्रयोग गर्नुहुनेछ ताकि तपाई वास्तवमा जानुहुन्छ पाउनुहोस् सन्देश तपाईंलाई यो लिनको लागि प्रेरित गर्दै।
के यो ठीक छ हरेक दिन 1 ibuprofen लिनुहोस्
डाक्टर स्भेन्सन भन्छन्, करिब %०% व्यक्तिले उनीहरूको औषधी निर्देशन अनुसार लिदैनन्। सब भन्दा साधारण कारण मान्छे सजिलै बिर्सन्छ। तसर्थ, यो एक समय छनौट गर्नको लागि उत्तम छ जुन औषधी सेवनलाई तपाईंको सामान्य तालिकाको एक हिस्सा बनाउने बनाउन सजिलो छ। उसले तपाईको दैनिक मेदलाई नियमितमा समावेश गर्ने सल्लाह दिन्छ जुन तपाईले पहिले नै दैनिक गरिरहनु भएको छ, जस्तै दाँत माझ्नु।
अन्तत: औषधोपचार प्रबन्धनको अन्य पक्षहरू जत्तिकै, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले आफ्नो डाक्टर वा फार्मासिष्टले दिएको निर्देशनहरू बुझ्नुभयो र त्यसमा अडिग रहनु पर्छ।
2 दिन पछि योजना बी काम गर्दछ
ट्यूम्स को लागी काम गर्न को लागी कति समय लाग्छ
ज्वरो आएपछि के खानुहुन्छ?
एक सामान्य रक्त शर्करा के हुनुपर्छ